Wixii ka dambeeya Sharciga Beeraha - Muxuu CBD Oil "sharci" ugu yahay dhammaan 50-ka gobol?
Shidaalka CBD ma sharci baa dhammaan 50-ka gobol?
Saliida CBD waa Sharci Tan iyo Sanadkii 2018 Bishii Beeraha ee Diseembar 2018
CBD Oil waxay noqotay mid baahsan dad badanna waxay yiraahdaan waa sharci dhammaan 50-ka gobol
Hi, Anigu waxaan ahay qareenka warshadaha cannabis ee ka jawaabaya su'aalaha sharciga ah ee cannabis si aad u caadi uga dhigi karto shuruucda marijuanaada. Maantana waxaan su'aal weyn ka helnay qof aragti fog leh iyo guud ahaan guud ahaan nin layaab leh. Waxaan u dhowaan doonnaa xaqiiqdaas.
Laakiin marka hore, waxaad dooneysaa inaad kusii ekaato ilaa dhamaadka maxaa yeelay waa waqtigaas inaad arki doontid anigoo jajabaya oo hoos u daadanaya sawirka Richard Nixon.
Laakiin inta aynaan u gaarin su’aasha maanta, hore u soco oo ka tag qaybtaada faallooyinka hoose. Kama jawaabi karo su'aashaada haddii aadan adigu weydiinin. Iyo intaad halkaa ku jiifsanayso, na sii wixii la mid ah oo suulashaada kor u qaad.
Su’aasha maanta waxay ka socotaa JX Fit, oo wuxuu weydiyaa, “Waxaa jira shirkado badan oo sheegaya inay gaarsiiyaan CBD hemp ubax dhammaan 50-ka gobol, taasina gabi ahaanba waa sharci maxaa yeelay waxay leedahay wax ka yar 0.3% THC mana ahan mid ka imaanaysa warshad marijuana. Waxay ka timaadaa warshad hemp. Ma sharci baa?"
Su’aal weyn. Iyo inaan bilawno, aan hubinno inaan daboolno sharciga federaalka iyo kan gobolka, ka dibna waxaan ka wada hadleynaa xoogaa yar oo dhaqaalaha ah, xoogaa yar oo ah ganacsiga meheradda 101.
Ka dhagayso PodCast ama Ku Daaw YouTube-ka waa cbd saliid sharci ah dhammaan 50ka gobol
LA XIDHIIDH BADAN: Sida loo Furiyo Khilaafaadka Xashiishadda ee Illinois
LA XIDHIIDH BADAN: Garyaqaan Maryland Cannabis Garyaqaan
Marabtaa inaad furato Kobcin Farshaxanimo
CBD waxay noqotay mid aad caan u ah, dad aad u tiro badanna waxay qatar gelinayaan inay ganacsi yeeshaan isla markaana iibiyaan saliidahan CBD.
Waxaan uun la hadlayey walaalkay. Wuxuu siinayaa CBD saliid eeygiisa. Waxaad sidoo kale siin kartaa saliid CBD eeygaaga. Ma hubo.
Ma sharci baa? Hagaag, gobolo badan, dowlado badan, dowlado badan ayaa arkay iftiinka markii ay timaado CBD dhammaan cilmi baarisyada caafimaad ee sii wada aruurinta faa'iidooyinkeeda, mana ka hadli doonno maanta faa'iidooyinka CBD, laakiin waxaan noqon doonnaa ka wada hadalka 46-da dawladood ee sharciyeeyey nooc ka mid ah marijuana caafimaad ama saliida CBD isticmaalka daawada.
Xaqiiqdii, waxaa jira afar gobol oo aan sharciyeeynin CBD caafimaad, afartaas gobolna waa Idaho, South Dakota, Kansas, iyo dabcan, Nebraska.
Hagaag, waxaan qiyaasayaa inay wali rabaan sharciga federaaliga ah kaas oo ah Xeerka Maandooriyaha La Xakameynayo, taas oo ah sababaha aan u burburin doonno sawirka Richard Nixon goor dambe. Xeerka Maandooriyaha Xakameeya ee bixiya xashiishadda cannabis oo dhan waa jadwal hal shay ah, oo dabcan ku jiri kara hemp. Hemp, sida ay u korayso duurka, waa la mid ah sida ay hoos ku Sharciga Maandooriyaha La Xakameeyay Mamnuuc sida xashiishadda kale.
Oo ka fikir taas, sababta oo ah haddii aad ku soo kordhineyso xashiishadda ujeeddooyinkeeda caafimaad, waa ubax, waxaad u qaabayn doontaa qaab aad uga duwan kan aad u badan tahay haddii aad u korayso maqaarkiisa, xuubkiisa, ama xitaa diidi karto. abuur, oo si xiiso leh ugu filan, ayaa laga dhaafay Sharciga Waxyaabaha La Xakameynayo.
Marka marka aad tagto Costco oo aad naftaada iibsato qalbiga hemp ee weyn, qalbiga hemp ee ah inaad ka heli karto qalbiga hemp oo dhan, kuwa aad ka heli karto dukaankaaga, halkaas ayey ku sugan yihiin sababtoo ah si gaar ah ayaa looga saaray koontaroolka. Sharciga Walxaha.
Sida fiberka ama xadhkaha ayaa laga reebi doonaa, ama lo ', digaagyada (hempherds), saamiga ku jira, ee leh guryaha warshadaha loogu talagalay.
Sidee bay markaa ku samayn karaan sheegashadaas inay ka timid hemp sidaas darteedna laga dhaafay? Hagaag, ma awoodi karaan. Waxaa laga yaabaa in lagu jahwareero waxa soo socda.
Laga yaabee inay isku dayayaan inay suuqa sii saadaaliyaan. Waxaan halkan uga hadli doonnaa wax ku saabsan waxa ku saabsan ganacsi-abuurka. Marka hore, waxaan ku soconaynaa annaga oo marayna sharciga federaalka iyo isbeddelada federaaliga ah ee hemp.
Waxaan ahay Illinois. Dhawaan, run ahaantii, runtii, Bruce Rounder ayaa saxeexay Barnaamijka hemp tijaabada ee Illinois, marka waxaan bilaabi karnaa inaan talo siinno beeralleyda gobolka ku saabsan sida ay ugu koraan hemp sida dalag kale oo la beddeli karo.
Biilka beertu wali hoos uma soo degin, oo haddii aad rabto intaas in ka badan waxaad kula socon kartaa wararka ku saabsan biilka beerta 'hashtag #FarmBillFriday, oo waxaad ka heli doontaa cusboonaysiin ka socota Kongareeska oo ku saabsan biilka beerta ee leh luqadda sharci-dejinta. Waxa biilka geliyey Senator McConnell oo ka socda Kentucky. Wuxuu bilaabay tijaabin hemp tijaabo ah heer federaal sanado yar ka dib, taasina waxay usocday si sax ah jihada saxda ah. Hadda waxaan haysannaa biilka beerta wali ma soo gudbin.
Sharciga Beeraha ee Beeralay iyo CBD Hemp waxay noqdeen sharci federaal sharci ah bishii Diseembar 2018.
Aynu ka hadalno dhaqaale ahaan sababta uu qofkani u sheeganayo sheegashadaas. Sababtoo ah waxaan ahay qareenka ugufiican cannabis ee jira. Taasi waa waxa aan ugu yeedhno sharciga, af-duubka. Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah markaad sheegto wax sharci ah, uma run sheegaysid inay ugu fiican yihiin. Sababta oo ah marka aad tidhaahdo wax waxa ugu fiican, waa shay tayo ahaan leh.
Hemp "ugu fiican" malaha waa xayeysiin.
Adiga ayaa ugu fiican adiga. Haddii aan dhageysanayo Miles Davis, oo aan u maleynayo inuu ka fiican yahay gees ka fiican John Coltrane, taasi waa dood Semantic ah oo ku saabsan waxa aan ka jeclahay iyo waxa aad jeceshahay. My ugu fiican maahan waxaaga ugu fiican.
Sharci ahaan badanaa waa waxoogaa yar oo qallalan oo qallalan. Ma jiraan wax sharci ah oo ugu fiican. Waad dhihi kartaa inaad tahay qareenka ugufiican, laakiin ma jiro ceel, ma sharci baa, taasi badanaa waa haa / maya su'aal. Haddii ay jiraan wax warshado ah oo ay adkaan doonto in laga jawaabo, waa tan warshadaha cannabis, maxaa yeelay runtii ma jiro jawaab haa / maya oo keliya oo la xiriirta sharcinimada xashiishadda cannabis iyo saliida CBD ee ka soo baxda ubaxa hemp, taasoo macno badan sameysa.
Ka dib wuxuu weydiyay 0.3%. Inta badan ubaxa hemp waxay ku badantahay CBD, laakiin aad bey u yar tahay THC. Just sida ay tahay. Ma aqaan. Waxaan kuu sheegayaa, inaad wax badan ka barato federaalkan iyo dhammaan xashiishadda cannabis, ayaa sidaad u eg tahay, sidoo kale laga yaabaa inaad u adeegsato sharci ahaan erey tayo ahaan ka soo horjeedda erey tiro iyo laba-labo haa ama jawaab.
Muxuu Yahay Xeerka 'CBD' ee ka yimaada Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Macnihiisu Tahay Meheradda?
Markaa haddaan ganacsade ahay oo aan ka dhigi karay jahawareer badan iibinta saliida CBD, oo aan fiiriyo xogta, oo aan arko in CBD ay aad u caan baxday, waa sharci in 46 gobol, waxay sharci ku tahay heer federaal , sababta oo ah waxaad dhihi kartaa inay tahay xashiishad caafimaad, laakiin markaa waxaad leedahay waxaad iska leedahay wuxuu ka yimid hemp, waxaadna sugeysaa biilka beerta.
Hadda qofna wax talaabo ah ma qaaday? Haa, FDA waxay u dirtay waraaqo xaddidan oo nooc-nooc ah dhawr ganacsiyada saliidda 'CBD' ah sannadihii 2015 iyo 2016, laakiin ma aanan arkin qof lagu qabtay, lagu qabtay iyagoo wata boorsooyin, oo ganacsigooda CBD xidhay. Malaha taasi waa waxa ay ka hadlayaan. Sababtoo ah sharciga ayaa ufiican kaliya inta dadka ay dhaqan galinayaan. Waxaan dhihi karaa xadka xawaaraha waa 70 mayl saacaddii, haddii uusan jirin cid u yeeli karta gudoomiyaha oo oranaya 70 mayl saacaddii, xadka xawaaraha ayaa ah wax, sax?
Marka Jeff fadhiyada ma uusan xiri. Sabab? Waxaa jira doorasho Noofembar, laakiin sidoo kale laga yaabee inay ogaadaan in dareenka dadweynuhu uu yahay mid hal dhinac ah, oo ay og yihiin in #FarmBillFriday hoos udhaceyso, wayna ogyihiin in 46 dowladood ay horay u sameeyeen sharcigaan, oo ay rumeysan yihiin, laga yaabee, sayniska gadaashiisa.
Marka waxay rabaan inay dadku si dhab ah u helaan saliid CBD oo tayo sare leh, waana sababtaas ay u dhahayaan inay sharci tahay. Waa xaraashka iibka iibka. Waa wax aad u yaab badan xagga iibka, sababtoo ah sharci ahaan badanaa ma aha wax tayo leh oo aad ku faani karto. Laakiin kiiskan, laga yaabee.
Immisa xog ah ayaa jirta? Hagaag, tani waa sawir qaabeyn wanaagsan, waxaanan ku soo gabagabeynaynaa qeybteena… sug, maya. Waxaan ku gabagabeyn doonaa qaybtaan anagoo eedeynay Richard Nixon, aan u jajabiney wejigiisa fool xun, fool xunna wejiga. Laakiin kahor, bal aan ka hadalno inta shidaal ee CBD ay qarxisay marka loo eego…
Haddii aad rabto inaad aragto haddii wax caan yihiin, waxaad arki kartaa waxay raadineyso, ama haddii wax is beddeleen waqti ka dib, tani waa isbeddel. Oo waxaa jira saddex xariiq oo aan dib u socon doono. Tan ayaan hadda soo dhigi doonaa. Waad arki kartaa inay tahay buluug, jaale, iyo casaan, casaankuna hadda waa uu baxayaa. Muxuu yahay guduudku? Hagaag, aan marka hore ka gudubno buluugga.
Midig buluug ah ayaa jira dhanka hoose, asal ahaan salka, taasi waa hemp. Iyo sida aad u aragto, hemp runtii meelna ma aado. Iyo kan kor ku xusan, midka ah xariiqda casaanka ee daboolay, waxay umuuqataa inay dib u buuxisay bishii Febraayo ee 2017, taasi waa xashiishad.
Oo sidaad u aragto, cannabis ayaa ah waddo aad looga jecelyahay hemp, laakiin majirto meel u dhow sida caan ah sida tan cannabidiol, loo yaqaan CBD. Bal eeg. Waxay dib u soo noqotey afar sano ka hor ama wax ka badan, waxayna u dhowdahay sidii wax aan hore loo maqal, iyo sida aan loo yaqaanin, sida hemp. Haddana hadda waa laga saaray.
Sida dadku waxbadan uga fahmaan CBD iyo Caafimaadka marijuana iyo xashiishka dadka waaweyn iyo xashiishadda wuxuu noqdaa mid aad iyo aad u baahsan. Hagaag, ugu dambeyntii, ugu dambeyntiina, waxyaabaha nacasnimada ah, nacasnimada ah ee uu ninkani sameeyay 1970-kii si loo hubiyo in hemp lagu soo daray Sharciga Maandooriyaha La xakameeyay, marka laga reebo saamigiisa, fiberka ama abuur jeermis dila, ugu dambeyntii waa la beddeli doonaa.
Oh, Waan ku necbahay adiga, Richard Nixon. Tani waa adiga oo dhan qaladkaaga.
Garyaqaanka Wershadaha Cannabis ayaa ku siinaya su'aalahaaga CBD su'aalaha ku saabsan Shuruucda Hemp Federal
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan weydii iyaga faallooyinka ama booqo cannabisindustrylawyer.com oo guji badhanka na soo wac. Ilaa aan ku arko goor dambe, xusuusnow, sharci ahaan xajiso.